Hasidisma - Wikipedia
Ny hasidisma na jodaisma hasidika dia fihetsiketseham-panavaozana ara-pivavahana jiosy naorin'i Ba'al Shem Tov tamin'ny taonjato faha-18 tao Eoropa Atsinanana, izay mampianatra fa ao amin'ny toerana sy ny zavatra rehetra Andriamanitra ary tokony atao am-pinoana sy amim-kafanam-po ary amin-kafaliana (hira sy dihy) fa tsy amin'ny fanarahana tafahoatra ny fombafombam-pivavahana ny fanompoana an'Andriamanitra. Ankehitriny dia isan'ny herin'ny jodaisma ortodoksa ny hasidisma.
Avy amin'ny teny hebreo hoe חסידות / 'Hassidut, izay midika hoe "fitiavam-bavaka" na "fifikirana amin'ny fivavahana" ny teny hoe hasidisma, teny avy amin'ny hoe חסד / izay midika hoe "falala-tanana" izy nanome ny mpamaritoetra amin'ny fiteny idisy hoe חסידיש / 'Hasidish.
1 Tantaran'ny hasidisma
1.1 I Ba'al Shem Tov
1.2 Ny mpandimby an'i Ba'al Shem Tov
1.3 Fanoherana ny hasidisma
2 Fampianaran'ny hasidisma
2.1 Finoana sy fanamafisana ny finoana
2.2 Fielezana sy akon'ny hasidisma
2.3 Famantarana ivelany
I Ba'al Shem TovModifier
Tamin'ny taona 1750 tao Eoropa Afovoany ny hasidisma amin'izao fotoana izao, ka ny raby Israel ben Eliezer (1700-1760) izay fantatra amin'ny anarana hoe Ba'al Shem Tov, no namorona azy tamin'ny fanoherany ny fanarahana ny endrika ivelany henjana loatra teo amin'ny fanao ara-pivavahana tamin'izany fotoana izany, ary ny fanoherany ny fahefan'ny mpanan-karena sy ny raby teo amin'ny vahoaka jiosy. Nampianatra i Ba'al Shem Tov fa tokony hanatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana sy ny fahazotoam-po ny olombelona, ary tokony hafaliana, amin'ny alalan'ny hira sy dihy, no hameno ny fanompoam-pivavahana ataon'ny mpino amin'Andriamanitra. Maro noho izany ny mpanara-dia an'i Ba'al Shem Tov, indrindra ny olona tsy manan-katao izay maro anisa ao amin'ny jodaisma hasidika tamin'izany fotoana izany.
Ny mpandimby an'i Ba'al Shem TovModifier
I Shneur Zalman
Isan'ireo mpandimby an'i Ba'al Shem Tov ny mpianany atao hoe Dov Baer ben Avraham avy any Mezeritzi (any Okraina) izay lehilahy nahay mandaha-teny, sy i Levi Yitshak (na Yitshok) avy any Berditchev (any Okrainia), ary i Shneur Zalman Borukhovich avy any Liadi (any Bielorosia).
Tsy nampandry an-tsoratra ny fampianarany i Ba'al Shem Tov fa ireo mpandimby azy no nanoratra boky maro, ka isan'izany ny Kedushat Levi ("Ny Fahendren'i Levy") izay voasoratr'i Levi Yitshak tamin'ny taona 1798 sy ny Tanya nosoratan'i Shneur Zalman tamin'ny taona 1796.
Ny andry ifaharan'ny fikampanan'ny Hasidima dia ny mpitarika azy atao hoe צַדִּיק / tzadik ("olo-marina"), izay hajaina fatratra amin'ny fiheverana azy ho mpanelanelana ny mpino amin'Andriamanitra, ho olon-kendry sady mpitari-dalana. Ny tzadikim (צדיקים) sasany dia nalaza fa mpanao fahagagana. Ny mpanara-dia ny hasidisma dia miavaka amin'ny maro amin'ny hafanam-po ananany amin'ny fanatanterahany ny fombam-pivavahany (ritoaly) ka misafidy ny fifikirana fatratra amin'ny fivavahana atao amin-kafaliana fa tsy ny fifehezan-tena tafahoatra amin'ny fandalinana sy ny fanarahana tafahoatra ny fombafombam-pivavahana. Manao sakafo masina izy ireo ka mifangaro amin'izany ny hira sy ny dihy mihodidina. Efa nisy ny vehivavy nitarika ny fihetsiketsehana, ka ohatra amin'izany i Udel (teraka tamin'ny taona 1720), zanak'i Ba'al Shem Tov, sy i Hannah Rachel Verbermacher izay atao hoe Virjinin'i Ludmir (tanàna any Okraina i Ludmir).
Eliyahu ben Shlomo Zalman
Fanoherana ny hasidismaModifier
Ny raby sy ny olona to teny teo amin'ny fiarahaminina jiosy dia nanohitra mafy ny hasidisma tamin'ny voalohany ka niampanga azy ho mampisara-bazana ny vahoaka. I Eliyahu ben Shlomo Zalman avy any Vilna (na Vilnio, any Litoania), izay isan'ny raby manam-pahaizana tamin'izany fotoana izany, dia nanameloka ny hasidisma ka nanao azy ho anatema (voaozona) tamin'ny taona 1772. Na dia izany aza dia nitohy ihany ny fiketsiketsehana sady niely haingana.
Finoana sy fanamafisana ny finoanaModifier
Ny fampianaran'ny Hasidima dia miorinana indrindra amin'ny mistika jiosy araka ny Talmoda sy amin'ny mistika jiosy tamin'ny Andro Antenantenany. Tsindriany voalohany ny amin'ny fifandraisam-pitiavana izay mampiray ny olona amin'Andriamanitra. Amin'izy ireo dia ao amin'ny toerana sy ny zavatra rehetra Andriamanitra, eny fa na dia ao amin'ny ratsy aza. Noho izany dia tokony hobvana ho tsara ny ratsy. Ny vavaka sy ny fandalinam-pinoana sy ny fieritreretana ary ny asa tsara dia mitarika ho amin'ny fahalalana tsara kokoa ny momba an'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra ataon'ny mpino dia tokony hatao amim-pitiavana an'Andriamanitra sy ny olona hafa. Tokony hivavaka ho an'ny Voary manontolo ny mpino.
Ao amin'ny jodaisma hasidika, ny lehilahy dia manokana ny ampahany be amin'ny androm-piainany amin'ny vavaka sy ny fandalinana ny lahatsoratra masina notovozina avy amin'ireo lovatsofin'ny hasidisma, ary ny tantaram-piainan'ny olo-masina malaza tao amin'ny hasidisma. Mizara tsodranom-pitahiana andidian'ny fivavahana jiosy izy ireo sady mitandrina fatratra ny Sabata sy ny fady ara-tsakafo araka ny fampianaran'ny jodaisma rabinika. Mikarakara ny fanabeazana ny tanora ho mpandimby azy ireo rahatrizay koa izy ireo.
I Martin Buber
Fielezana sy akon'ny hasidismaModifier
Ny ankamaroan'ny Jiosy hasidika dia novonoina tamin'ny fotoan'ny Shoah (fandringanana Jiosy nataon'i Hitrer). Amin'izao fotoana izao ny Hasidima dia miisa any amin'ny 130 000 any ho any tamin'ny taona 2016 ka 5%n'ny Jiosy maneran-tany izany, ka ao Israely sy any Etazonia no betsaka azy ireo indrindra.
Ny fampianaran'ny hasidisma dia hita amin'ny fiainan'ny Jiosy vokatry ny asa soratr'ilay filozofa jiosy atao hoe Martin Buber ka hita taratra koa amin'ny filozofia sy ny treolojia jiosy anjehitriny izany.
Ankohonana hasidika eo amin'ny Borough Park, any Brooklyn, Etazonia
Manao akanjo lava ivelany mainty (idisyː רעקל / rekel na בעקעטשע / bekeshe) ny lehilahy ary misy volombava lava sy ahitana volo mihoatra halava tandrify ny fihirifany andaniny sy ankilany ary misatroka kalôty sady manisy satroka mainty (hebreoː שטרײַמל / shtreimel). Ny vehivavy dia manao akanjo tsy mampiseho vatana, ka zipo lava sy akanjo lava tanana no anisiany. Ny vehivavy manam-bady dia manisy solovolo (idisyː שייטל / sheytl) sy satroka telo zoro manarona ny loha hatrany amin'ny vozona na ny soroka, saron-doha (idisyː טיכל / tikhl).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasidisma&oldid=973391"
Dernière modification le 26 Aogositra 2019, à 08:05
Voaova farany tamin'ny 26 Aogositra 2019 amin'ny 08:05 ity pejy ity.